Deegaanada Somaliland oo 4 maalmood Internet-ka laga jari doono
HARGAYSA, Somaliland- Wararka uu helayo Warsidaha Garowe Online ayaa sheegay in guddiga Doorashooyinka Somaliland uu codsaday in gabi ahaanba Gobolada iyo degmooyinka maamulkaas hoos taga laga jaro internet-ka maalmaha lagu guda jiro codaynta iyo tirinta doorashada.
"Guddiga ayaa codsaday in internet-ka la jaro, iyagoo ka walaacsan xaalada dalka iyo qaabka wax u dhici karaan, runtii waa markii ugu horaysa saddex murashax oo saamaynta intaas le'eg ku leh bulshada Somaliland ay tartamaan taas ayaa walaaca keentay, ciidamada heegan ayaa la galiyay," sidaas waxaa yiri qof xog ogaal ah oo magaciisa codsaday inaan la shaacin.
Shirkadaha Internet-ka bixiya iyo qaybaha ay khusayso ayaa la qaatay go'aankan kasoo baxay Guddiga Doorashooyinka Somaliland.
"Waan qaadanay go'aanka Guddiga iyo tala soo jeedinta ay sameeyeen, waxaan sugaynaa marka ay noo soo diraan Email oo ay dhahaan jara internet-ka," sidaas waxaa Garowe Online u sheegay mid kamid ah maamulka shirakaadka bixiya adeegaas oo ku sugan Hargaysa.
Waa markii ugu horaysay muddo intaas le'eg Internet-ku maqnaado Somaliland oo ka go’dey Soomaaliya inteeda kale 1991.